Mpanamboatra fenitra britanika - Shina anglisy orinasa mpamokatra & mpamatsy
Fananganana eny ambonin'ny habakabaka
Manadio ny rivotra
Mpanadio ny rivotra
Andian-tsarimihetsika BS1D anglisy sy kofehy mahazatra, andiany vaovao novokarin'ny TAILI INDUSTRIAL CO., LTD. Kalitao ambony ary miaraka amin'ny CE, BS, GCC fanamarinana, ny garantiana dia 10 taona Tena endrika vaovao ny The frontplate izay tsy misy endrika firafitra. Ny rindrambaiko voalohan'ity andiany ity dia vita amin'ny fitaovana PC fiarovana avo ho an'ny tontolo iainana. Ireo fifandraisana mifamadika dia vita amin'ny fitaovana alloy volafotsy avo lenta. Mihoatra ny 40000 ny fandidiana an-toerana. Ny tendron'ny sokitra dia vita amin'ny varahina phosphor, izay ...
Andiany BS1C andiam-pandehan'ny fanatanjahantena anglisy sy socket, andiany vaovao novokarin'ny TAILI INDUSTRIAL CO., LTD. Kalitao avo lenta ary miaraka amin'ny CE, BS, GCC fanamarinana, ny antoka dia 10 taona Ny frontplate amin'ity andiany ity dia vita amin'ny fitaovana ambony indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana PC ary ny Zinc Metal. Ireo fifandraisana mifamadika dia vita amin'ny fitaovana alloy volafotsy avo lenta. Mihoatra ny 40000 ny fandidiana an-toerana. Ny takelaka fantsona dia vita amin'ny varahina phosphor, izay manana toetran'ny fitondran-jiro elektrika tsara an ...
Andian-tsarimihetsika BS1B anglisy sy kofehy mahazatra, andiany vaovao novokarin'ny TAILI INDUSTRIAL CO., LTD. Kalitao ambony ary miaraka amin'ny CE, BS, GCC fanamarinana, ny antoka dia 10 taona Ny frontplate amin'ity andiany ity dia vita amin'ny fitaovana ambony indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana PC sy ny fitaratra Tempered. Ireo fifandraisana mifamadika dia vita amin'ny fitaovana alloy volafotsy avo lenta. Mihoatra ny 40000 ny fandidiana an-toerana. Ny kitranan-boloky dia vita amin'ny varahina phosphor, izay manana toetran'ny conductivit elektrika tsara ...
Andian-tsarimihetsika BS1A fanatanjahan-tena mahazatra sy sokitra, andiany vaovao novokarin'ny TAILI INDUSTRIAL CO., LTD. Kalitao avo lenta ary miaraka amin'ny CE, BS, GCC fanamarinana, ny antoka dia 10 taona BS1A andian-dahatsoratra sy socket dia andiany fototra amin'ny famindrana sy sakana BS vaovao. Ny frontplate dia vita amin'ny fitaovana PC fiarovana avo ho an'ny tontolo iainana. Ireo fifandraisana mifamadika dia vita amin'ny fitaovana alloy volafotsy avo lenta. Mihoatra ny 40000 ny fandidiana an-toerana. Ny tendron'ny sokitra dia vita amin'ny varahina phosphor, izay manana ...
Ny kofehy sy sokitra britanika, kalitao avo lenta, ny garantiana dia 8 taona Ny frontplate andian-dahatsoratra ity dia vita amin'ny fitaovana stainless steel antitra. Ireo fifandraisana mifamadika dia vita amin'ny fitaovana alloy volafotsy avo lenta. Mihoatra ny 40000 ny fandidiana an-toerana. Ny takelaka fantsona dia vita amin'ny varahina phosphor, izay manana toetran'ny fitondran-jiro elektrika tsara ary elasticity maharitra. Mihoatra ny 30000 ny hetsiky ny plug in-off.
Ny kofehy sy sokitra britanika, kalitao avo lenta ary miaraka amin'ny CE, BS, GCC fanamarinana, ny garantiana dia 10 taona Ny frontplate amin'ity andiany ity dia vita amin'ny fitaovana ambony indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana PC, ny rindrina vita amin'ny plate dia mahatonga ny endrika tsara tarehy kokoa. Ireo fifandraisana mifamadika dia vita amin'ny fitaovana alloy volafotsy avo lenta. Mihoatra ny 40000 ny fandidiana an-toerana. Ny takelaka fantsona dia vita amin'ny varahina phosphor, izay manana toetran'ny fitondran-jiro elektrika tsara ary elasticity maharitra. The p ...
Ny kofehy sy sokitra britanika, kalitao avo lenta ary miaraka amin'ny CE, BS, GCC fanamarinana, ny antoka dia 10 taona Ny frontplate amin'ity andiany ity dia vita amin'ny fitaovana ambony indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana PC. Ireo fifandraisana mifamadika dia vita amin'ny fitaovana alloy volafotsy avo lenta. Mihoatra ny 40000 ny fandidiana an-toerana. Ny takelaka fantsona dia vita amin'ny varahina phosphor, izay manana toetran'ny fitondran-jiro elektrika tsara ary elasticity maharitra. Mihoatra ny 30000 ny hetsiky ny plug in-off.